Indawo ephindwe kabini ecaleni kwendalo eSanta Cruz
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguBotafogo & Copanema
UBotafogo & Copanema unezimvo eziyi-222 zezinye iindawo.
I-Suite ilula kakhulu kunye neebhedi ezimbini ezingatshatanga kufuphi nemithi kunye negadi, ePousada Fonte do Cajú. Ukuhlala kubekwe imizuzu emibini uhamba ukusuka emlonyeni wePiraquê-açú River, eSanta Cruz de Aracruz. Ixabiso lentengiso ngelixa indawo yokuhlala ihlaziywa.
IPousada Fonte do Cajú ikwikona ethe cwaka yaseSanta Cruz, ilali eyimbali esemlanjeni woMlambo iPiraquê-açú, kumasipala waseAracruz (Espírito Santo). Indawo, elungiselelwe indawo yakho yokuhlala kunye nokuzonwabisa kunye nendawo yokupaka yasimahla, kukuhamba imizuzu embalwa ukusuka elunxwemeni lolwandle. IPousada Fonte do Cajú ikwabamba iYoga Pratique, kunye neeklasi zeYoga kunye nokubakho kwemassoterapy.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-222 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
ESanta Cruz uya kufumana: iinketho eziqhelekileyo zokutya kwe-capixaba ezibanjwe kwiindawo zokutyela iTravessia, Irajá kunye neMocambo, kunye nezinye iindlela zokutya ezifana nokutya kunye nokutya. Ukhetho lweemarike, iibha kunye nee-snack bar. Kule ndawo uya kufumana iindlela zokundwendwela, ezinje: Imyuziyam yaseSanta Cruz, iMonument yokuFika kwabaFudukeleyo baseItali, iCajú Waterfont, iMangrove Boat Ride, iBha edadayo kunye neCawa yaseNossa Senhora da Penha. Kwi-Coqueiral, i-6 km ukusuka e-Santa Cruz, kukho ukhetho oluninzi lwezorhwebo, kunye nonxweme lomasipala wase-Aracruz.
Umbuki zindwendwe ngu- Botafogo & Copanema
Ekufikeni kweqela lethu liya kubonisa indlu, linikezele ngezitshixo kwaye likuvumela ukuba wonwabele ixesha lakho eSanta Cruz. Ekupheleni kokuhlala siyabuya ukuze siqhubele isheke. Kwaye ukuba kukho enye into oyifunayo, unokuqhagamshelana nathi ngokulula usebenzisa i-Airbnb.
Ekufikeni kweqela lethu liya kubonisa indlu, linikezele ngezitshixo kwaye likuvumela ukuba wonwabele ixesha lakho eSanta Cruz. Ekupheleni kokuhlala siyabuya ukuze siqhubele isheke.…